AUBA oo noqday laacibka ugu Mushaarka badan Premier Legaue…..(EEG Liiska sagaalka laacib ee ku soo xiga) – Gool FM
AUBA oo noqday laacibka ugu Mushaarka badan Premier Legaue…..(EEG Liiska sagaalka laacib ee ku soo xiga)
(London) 16 Sebt 2020. PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG ayaa lagu soo warramayaa inuu yahay ciyaaryahanka ugu mushaarka badan Premier League kaddib markii uu qalinka ugu duugay heshiis cusub kooxda Arsenal.
31-sano jirkaan ayaa soo afjaray wararka la isla dhexmarayay ee ku saabsan mustaqbalkiisa, isagoo saxiixay heshiis saddex sano ah oo uu ku sii joogayo garoonka Emirates.
Isagoo ka hadlaya joogitaankiisa waxa uu yiri: “Waxaan doonayaa in aan noqdo halyeey Arsenal ah, sida Thierry, Wrighty, Adams iyo Bergkamp.
“Waxaan rabaa inaan ka tago wax dhaxal ah, halkan waa halka aan ka tirsanahay, kani waa reerkayga.
“Waxaan halkaan ku haysannaa wax xiiso leh, waxaana aaminsanahay waxa ugu fiican inay tahay inaan u imaado Arsenal.”
Aubameyang ayaa horay qiyaastii 200 oo kun oo gini toddobaadkii ugu qaadan jiray waqooyiga London, laakiin Arsenal ayaa si aad ah u hagaajisay heshiiskiisa cusub.
Mushaharkiisa ayaa sare loo qaaday haatan, waxaana uu arki doonaa isagoo jeebka ku shubanaya todobaadkii 350,000 oo gini iyo lacago kale oo dheeri ah.
Tani waxa ay ka dhigtay Auba inuusan kaliya noqonin ciyaaryahanka ugu mushaharka badan Gunners ee ka sarreeya Mesut Ozil, laakiin waa shaqsiga ugu mushaharka badan horyaalka Premier League.
Waxaa ku soo xiga xiddiga ay Aubameyang ka wada tirsan yihiin Arsenal ee Ozil, kaasoo isaguna isbuucii qaata 350 kun oo gini.
Waxaana Ozil booska labaad kula jira Goolhayaha Kooxda Manchester United ee David De Gea, kaasoo qaata todobaadkii in la mid ah inta uu jeebka ku shubto xiddiga Gunners, kaddib markii shabaq ilaaliyahan reer Spain uu heshiis cusub saxiixay bishii September.
Kubbad-sameeyaha kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne ayaa ku soo xiga, kaasoo ka mahadcelinaya mushahar dhan 320,000 oo gini oo uu todobaadkii ka qaato garoonka Etihad.
Saxiixa ugu qaalisan kooxda Chelsea ee Kai Havertz oo 21-sano jir ah, ayaa kaalinta shanaad ku jira, maadaama uu gurigiisa u qaato lacag dhan 310 kun oo gini toddobaad kasta.
De Bruyne saaxiibkiisa ay ka wada tirsan yihiin Man City ee Raheem Sterling ayaa ku jira kaalinta lixaad, isagoo qaata 300,000 oo ginni markii uu heshiis shan sano ah saxiixay sanadkii 2018.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Kooxda Manchester United, Paul Pogba ayaa ku jira kaalinta todobaad, isagoo jeebka ku shubta todobaadkii mushahar dhan 290,000 oo gini, waxaana ku soo xiga ninka ay dhalashada wadaagaan ee reer France, Anthony Martial kaasoo isaguna qaata 250 kun oo gini.
Weeraryahanka Man City ee Sergio Aguero ayaa ku jira kaalinta sagaalaad, isagoo jeebka ku shubta 230 kun oo gini, halka weeraryahanka Arsenal ee Willian uu dhameystiray tobanka ugu sarreysa ee ugu mushaharka badan horyaalka Premier League, maadaama uu gurigiisa u qaadanayo 220 kun oo gini isbuucii.
Macallinka Leeds United oo ka sarreeya kan Man United.... (10-ka Tababare ee ugu Mushaharka badan Premier League oo la shaaciyay)